Izindaba - Izinzuzo zeCa Zn Stabilizer
Izinzuzo zeCa Zn Stabilizer
Njengamanje, izivikeli zokushisa ze-PVC ikakhulu zifaka usawoti womthofu, i-calcium eyinhlanganisela ne-zinc, i-organic tin, i-antimony ephilayo, izinto zokuvikela ukushisa ezisizayo nezinhlanganisela zomhlaba ezingavamile. Okukhipha okukhulu kunakho konke yi-lead lead stabilizer yendabuko kanye ne-Ca Zn stabilizer eyinhlanganisela.
I-Ca Zn stabilizer iluhlaza okotshani futhi inemvelo ngaphandle kwezakhi ezisindayo zensimbi, njenge-lead kanye ne-separator.Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamazinga wakamuva wokuvikelwa kwemvelo emazweni ahlukahlukene.
Isiqiniseko seCa Zn simelana nokungcola kwe-vulcanization. I-Ca Zn stabilizer inezimpawu ezinhle zokushintsha uhlelo.Lapho i-stabizer yendabuko ehlanganisiwe yendabuko iguqulwa ibe yi-organotin thermal stabilizer, ukungcoliswa okuphambanayo kuzokwenzeka, okuholele kuzindleko eziphakeme zokushintsha uhlelo, ngenkathi i-Ca Zn isiqinisi esishisayo singasebenzi ngalezi zinto ezimbili ezishisayo ama-stabilizers, futhi izindleko zokushintsha ziphansi.
Ubuningi be-Ca Zn stabilizers buphansi, futhi inani le-calcium carbonate lingakhuphuka ngokufanelekile ukunciphisa izindleko. Uma kuqhathaniswa ne-stabilizer yokuqinisa ukushisa eyinhlanganisela, ubukhulu beCa Zn heat stabilizer bucishe bube ngu-40%.
I-Aimsea ibhizinisi lesizwe eliphezulu lobuchwepheshe eligxile ekuhlanganisweni kocwaningo, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezinto zokuvikela ze-PVC ezingezona ezinobuthi.
Ama-stabilizers asetshenziswa kakhulu emikhiqizweni ye-PVC, enjengentambo nekhebula, imishini yezokwelapha yamathoyizi, imikhiqizo esobala, imikhiqizo enekhalenda, ukufakwa kwamapayipi, amashidi okuhlobisa, izicathulo ezinegwebu, amaphrofayli omnyango newindi, njll.
Isikhathi Iposi: Oct-27-2020
PVC Izithasiselo, I-PVC One Pack Stabilizer, I-PVC Heat Stabilizer, Isisimamisi se-PVC, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi,